China Emergency Bottom valvụ ụlọ ọrụ na-emepụta | Jiasheng
API Drop nkwụnye
API Djá Cap
Mkpụrụ ume iku ume
Alụlụlụ Iweghachite Anwụrụ & Valve
Nnwale Nwere Ike
Manhole Dome mkpuchi
Remote API overfill valvụ
Mmanụ wụfuru akpa
Tanka Fuel nzipu Drop E ...
Akaụntụ Iweghachite Anwụrụ
Emergency Bottom valvụ
Ihe na Size:
Aluminom Alloy：80/100/150 (3 ”/ 4” / 6 ”)
Igwe anaghị agba nchara：80/100 (3 ”/ 4”)
Profaịlụ 1: mberede ebipụ valvụ, arụnyere na ala nke tankị ụgbọ ala ,. Ọ bụrụ na ụgbọ mmiri ahụ nwere mmetụta dị egwu, valvụ a na-egbutu ihe mberede ga-agbaji na-akpaghị aka, kewaa ụgbọ mmiri tankị na pipeline pipeline n'ime ụgbọ mmiri nwere onwe ya, gbochie leakage mmiri mmiri ma meziwanye nchebe n'oge njem, ya mere a na-eji ya eme ihe n'ụwa niile. Ngwaahịa a na-ezutekwa usoro QC / T932-2012.
Ọrụ na njirimara: Mgbapu ebipụla ihe mberede na-eji ngwongwo ihe eji emepụta aluminom, nkedo nkedo, ọgwụgwọ ọgwụgwọ siri ike n'elu, nguzogide corrosivity dị elu, ngwa ya n'ime na-eji ihe nchara igwe, mee ka ndụ ya dịkwuo ogologo.
45 Celsius ala valvụ
90 Celsius ala valvụ
180 Celsius ala valvụ
Fuel tanker ụkwụ valvụ na-akpọ Bottm valvụ arụnyere na ala nke tanka, n'elu akụkụ na-tightly anọchi n'ime tankị. Mgbapụta ihe na-emepụta ihe na-eme ka njedebe ngwaahịa ghara ịdaba mgbe ụgbọ mmiri ahụ dara, ọ ga-ebipụ onwe ya site na uzo a n'okpuru ọnọdụ enweghị mmetụta ọ bụla na akara ahụ. Nke a ga - echedo ụgbọ mmiri a na - atụgharị site na mmiri iji hụ nchekwa mgbe njem. Ngwaahịa a kwesịrị ekwesị maka mmiri, mmanụ dizel, mmanụ ụgbọala na mmanụ ọkụ na mmanụ ọkụ ndị ọzọ, ect.
1. Ihe: Aluminom
2. Size: 3 ", 4"
3. Jikọọ typ: Square Flange
4. Mepee mode: Pneumatic
5. Okpomọkụ: -20 ~ 70 ogo
Uru & Njirimara
1. Nrụgide-Balanced Type
Mgbe valvụ ahụ mechiri, nrụgide mmanụ ọkụ enweghị ike imeghe valvụ ahụ.
2. Ọgwụ Ọrịa Pụrụ Iche
A na-agafe akụkụ valvụ ahụ dum usoro pụrụ iche iji melite mgbochi corrosion.
3. Hydrodynamic Isi
Nzube na akwa mbuli elu na-ebelata nrụgide mgbatị iji nye oke ọsọ ọsọ.
4. Mpụga Mpaghara Mpụga
Na-ezute ọkọlọtọ chọrọ iji belata nfu ngwaahịa maka ihe ọghọm.
5. Manual emepe Ngwaọrụ
Mgbe ọ dị mkpa ịkwụsị ngwa ngwa, njikwa ikuku na-abaghị uru, enwere ike mepee site na ntuziaka.
6. Ntinye dị mfe
Ogo nke valvụ ahụ mara mma karị, dabara adaba maka oghere dị ntakịrị.
Nke gara aga: 5-Waya Overfill Optic Nyocha na Socket
Osote: Flange Breather valvụ
Mberede Kpochapụ Valve
Mberede Mechie Valve
Tank Truck Emergency Bottom valvụ
Mpaghara Wang Ji Industrial, Ogige Suining, Xuzhou City, Jiangsu Province, China